Dry-karazana Cable Granulating Plant - China Henan Suyuan Lanning
No.238 Tongbai South Road, Zhongyuan District, Zhengzhou, Sina
Mon-Fri: 9: 00 am-6: 00pm (Mba hamela antsika hafatra amin'ny fotoana nonworking)
Air-Gravity manokana amin'izao fotoana izao Separator
Mandany Wire Recycling Fitaovana
Desktop-karazana Cable Stripper Machine
Dry-karazana Cable Granulating Plant
Fampidirana-karazana Copper Wire Granulator
Wet-karazana Cable Granulating Plant
Mandany Tyro / fingotra Recycling Fitaovana
Pretreatment Tyro Machine
Kodiarana Piece Cutter
Sidewall Tyro Cutter
Strip Tyro Cutter
Mandany Tyro / fingotra vovoka
Tyro ho vovoka famokarana Plant
Fako Tyro Pyrolysis To Oil
Tyro Pyrolysis To Oil
Mandany Motor Recycling Fitaovana
Motor hanorotoro Recycling Producton-dalana,
Motor Fanodina Recycling Fitaovana
Motor Stator Recycling Fitaovana
Mandany plastika Recycling Fitaovana
Plastic mandany torotoro Fitaovana
Plastic Fitotoana Vary Mill
Plastic mandany Recycling Plant
Plastic mifangaro Material Separator
Tavoahangy PET ny fako plastika ny fisasana Film Zavamaniry
Mandany radiatera Recycling Fitaovana
Radiatera Pretreatment Fitaovana
Radiatera Copper & Aluminum Separator
Radiatera Sawing Machine
Mandany radiatera Recycling-dalana,
Mandany faritra Board Recycling Fitaovana
Faritra Board Recycling-dalana,
Electronic Component nasiana mpiambina Machine
Mandany Medicine Package Recycling Fitaovana
Medical Aluminum Plastic Package manavaka-dalana,
Mitete tavoahangy Silica Gel -Plastic manavaka Fitaovana
Fako Tyro Processing To fingotra Powder
Radiatera Copper & aluminium Separator
Motor hanorotoro fanodinana producton tsipika
Electronic singa fototra nasiana mpiambina Machine
Alefaso mailaka ho anay Download as PDF
Manerana izao tontolo izao, dia misy karazana fako miovaova telegrama, ny tanjona dia ny handresy ny fahaverezan'ny varahina sy ny metaly hafa nandritra ny fanodinana ny fahaterahana indray, mba hahatonga azy kokoa siantifika, automatique. Tsy mampihena ny asa, hampitombo ny famerenana ny tahan'ny, ka noho izany fahaiza-miasa mahomby hanatsarana ny vokatra. Pamokarana manontolo dia natao ho siantifika, tontolo iainana, sy ny vola-mahomby.
Mayslynn Recycling Company lasa Cable voalohany Granulator fanodinana-dalana, ao Shina tamin'ny 1996. Tao anatin'ny 20 taona, miaraka amin'ny zava-baovao sy ny Optimization mitohy, dia efa foana ny orinasa foana-mitondra ambaratonga, ary ny toerana toy ny benchmark ao anatin'ny orinasa ao Shina. Efa nomena fahefana mihoatra ny 500 karazana Cable Granulator manerana izao tontolo izao, izay mampiseho ambony ny mpanjifa fankatoavana.
TMJ modely Cable Granulator tsipika efa niasa ho afaka ny efitra telegrama amin'ny torotoro, ny fahamaotinana fisarahana, hovitrovitra fisarahana, fisarahana andriamby dingana hampisaraka ny plastika sy ny varahina, vy, sns ... ny famerenana tahan'ny dia niakatra ho any 99%.
1.Intelligent fanaraha-maso amin'ny firafitry mahay mandanjalanja, mandeha ho azy ny fiarovana fanakatonana be loatra nandritra ny hetsika.
2.Can ho fitaovana amin'ny shredder ho crusher voalohany, mpanampy milina sakafo, izay mampihena ny vola lany ny asa.
3. avo-manavaka marina tsara rafitra sy ny fanaraha-maso matetika, ny famerenana ny tahan'ny mety ho tahaka ny avo tahaka ny 99%.
4. hanorotoro rafitra mampiasa hery avo-alternating vary lavaka avo torotoro fahombiazana, ny lelan-tsabatra dia firaka fitaovana vy.
5. Crusher dia hihena fitaovana amin'ny rafitra, mba hisakanana ny plastika tsy mifikitra varahina, rehefa mahazo ny mari-pana dia avo loatra.
6. dia fitaovana miasa mihidy amin'ny vovoka fanampiny fanesorana rafitra, miaraka amin'ny fanaraha-maso mahomby ny vovoka, ny tontolo iainana namana.
1. Ny fitaovana dia Modular amin'ny voalamina tsara rafitra sy ny fibodoana ny faritra kely.
2. lehibe amin'ny endrika, azo antoka sy mafy orina, mora ny miasa, tsy sarotra fametrahana sy ny mpandraharaha iray ihany no miasa rehefa herinaratra.
3. fanaovana fantina system: avo-manavaka fametrahana mazava tsara amin'ny fanaraha-maso matetika ampiharina. Ny manavaka tahan'ny dia niakatra ho any 99%.
4. nanorotoro rafitra: ny avo-mahery vaika nivembena lelany manana fahaiza-miasa mahomby torotoro ambony kokoa. Ny lelan-tsabatra na ny fanaka vy amin'ny mateza firaka ela velona.
5. Ny fitaovana miasa mihidy mba tsy ny fahaverezan'ny fitaovana, ny famoahana entona sy ny vovoka kitapo fanampiny sivana sy ny rivotra sivana rafitra mahomby mifehy ny vovoka.
Dry-karazana fanodinana varahina pamokarana:
Ny tontolo iainana ny famokarana tsipika tokony ho maina sy madio. Maro manety ary nanorotoro dingana dia nanatona mba hampisaraka ny fitaovana. Ny milina napetraka peels eny an-trano tamy tariby tariby ny plastika tranony sy ny varahina, manasaraka azy ireo ho any amin'ny plastika sy varahina sombin vovoka. Ny fanodinana varahina fako rehetra pamokarana dia fehezin'ny plc (Programmable Logic Controller) afa-tsy ny boky fampianarana sakafo ara-nofo. Manana ny mandeha ho azy be loatra asa ny fampitandremana sy ny fanivanana nakatony-midina. Dia mora sy azo antoka ny miasa.
1.Compact rafitra sy ny firafitry ny antonony, mora ny hametraka.
2.Controlled ny plc. Mitohy fahana, manan-tsaina fandidiana, mora ny miasa.
3. Ny firafitry ny milina dia mora ho an'ny hetsika sy ny fitaterana.
4.The grinder faharoa mandany Alternate lelany mitarika ho amin'ny avo vokatra, ambany tabataba sy mafy orina mihazakazaka.
5. Ny Separator tahan'ny ho an'ny tariby fifandraisana mety hahatratra hatramin'ny 97%, mifangaro tariby hahatratra hatramin'ny 95%.
6.The manasa-fanodinana ara-nofo nandritra ny roa fotoana izay manasaraka ny vy sy ny vy tsy Wikibolana anglisy.
7.No vovoka fivoahan'ny, ny vovoka fisarahana tahan'ny afaka hahatratra hatramin'ny 99%.
JZ-DX4000: Ny fahafahana ny fitsipika pamokarana dia 2000kg / h ny 4000kg / h. Ary ny lehibe dia afaka araka ny karazana ny mpanjifa ny fepetra hanao ny mari izany. (Toa an'i 6T / H, 8T / H, 10T / H)
Previous: Cable Stripper Machine SCS-150
Manaraka: Fampidirana-karazana Copper Wire Granulator
Telegrama tariby Granulator
Copper Granulate Recycling Machine
Copper Granulting Machine
Copper Wire Fitotoana Vary Machine
Copper Wire Fitotoana Vary fanavahana Machine
Copper Wire Recycling-dalana,
Copper Wire fanodinana Machine
Copper Wire Water Granulator Fitaovana
Electric Cables Granulator Machine
Industrial Varahina Wire Recycling Fitaovana
Mini Varahina Wire Granulator
Tamy Cable Varahina Granulator
tamy Copper Cable Granulator
Tamy Copper Granulator
tamy Copper Wire Recycling Equipment
Tamy Copper Wire Recycling Machine
Small Copper Granulator Wire
Tyro To fingotra Granules Plant
Nampiasa Wire Granulator
Mandany Copper Wire Granulator
fako Varahina Wire Recycling Equipment
Wire nanapaka Machine
Fa ny fanontaniana momba ny vokatra na pricelist, azafady hamela ny mailaka, na mandefa mailaka ho anay.